नेकपा एकताः १४७ पोलिटब्युरोको सूची टुंगियो, कसको भागमा कति? – Everest Dainik – News from Nepal
नेकपा एकताः १४७ पोलिटब्युरोको सूची टुंगियो, कसको भागमा कति?
महिला संगठनमा अध्यक्ष प्रचण्डले उर्मिला अर्यालको नाम अघि सारेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विकल्पमा अर्को व्यक्ति अघि सार्न दबाब दिएका छन् । इन्जिनियर, मानवअधिकार र कानुन क्षेत्रका जनसंगठनको भने यसअघि नै एकता भइसकेको छ । इन्जिनियरको जनवर्गीय संगठन संयोजकमा शम्भुबहादुर श्रेष्ठ र सहसंयोजकमा हरि पराजुली चयन भएका छन् । श्रेष्ठ पूर्वएमाले र पराजुली पूर्वमाओवादीनिकट हुन् । त्यस्तै, मानवअधिकार तथा सामाजिक अभियान नेपालको संयोजकमा मीनबहादुर शाही र सहसंयोजकमा हुकुम पोखरेल सर्वसम्मत भएका छन् । शाही तत्कालीन एमालेनिकट हुन् भने पोखरेल माओवादीनिकट । यस्तै, नेपाल कानुन व्यवसायी संगठन संयोजकमा रुद्र नेपाल र सहसंयोजकमा दीनमणि पोखरेलको नाम सिफारिस भएको छ । नेपाल तत्कालीन एमालेनिकट र पोखरेल माओवादीनिकट हुन् ।
नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँगको परामर्शमा एक सय ४७ सदस्यीय पोलिटब्युरो सदस्यको सूची तयार गरेका छन् । सचिवालय बैठकमा प्रस्ताव गर्ने गरी अध्यक्षद्वयले सूची टुंगो लगाएका हुन् । एक सय ४७ जनामा साबिक एमालेबाट ८१ र माओवादीबाट ६६ सदस्य छन् । तत्कालीन एमालेबाट २२ जना नयाँ अनुहार थपिएका छन् । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।